सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टो क्यासिनो - Gambling Papa
1 क्राइप्टोकरन्सी भनेको के हो?
2 एक क्रिप्टो क्यासिनो के हो?
3 क्राइप्टो क्यासिनोमा कसरी खेल्ने?
4 सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टो क्यासिनो
5 के खेल क्रिप्टो क्यासिनो प्रस्ताव?
6 कसरी क्रिप्टो क्यासिनोमा जम्मा गर्ने?
7 कसरी क्रिप्टो क्यासिनोबाट फिर्ता लिने?
8 कसरी तपाईंको आफ्नै क्रिप्टो क्यासिनो खोल्ने?
धेरै बर्षहरूमा, क्रिप्टो रेकर्ड समयमा अस्पष्टबाट अपेक्षाकृत मुख्यधारमा गएको छ। २०१ 2017 देखि, धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिहरू ब्यान्डगागनमा घुम्न आएका छन्। आज, नयाँ आगमन उद्योग रेकर्ड गतिमा प्रवेश गरिरहेका छन्।
अझै पनि, यस्तो लाग्छ कि यदि अझ बढी व्यवसायहरूले अनुपम वित्त प्रविधि प्रयोग गर्न थालेका छन्।
फलस्वरूप, हामीले सर्वश्रेष्ठ क्यासिनोहरूको लागि केहि सिफारिसहरू पाएका छौं जसले तपाईंलाई क्रिप्टोको प्रयोग गरेर खेल्न दिन्छ। यदि तपाईंले आफ्नो जेबमा प्वाल पार्दै केही सिक्का प्राप्त गर्नुभयो भने, निम्न संस्थाहरू सबै तपाईंको उद्देश्यका लागि उत्तम हुनुपर्दछ।
क्राइप्टोकरन्सी भनेको के हो?
निस्सन्देह, यसले क्रिप्टोकरन्सीहरू के हुन् भनेर विस्तृत रूपमा वर्णन नगरी अगाडि बढ्नको लागि यसले कुनै खास अर्थ राख्दैन। यसलाई सरल भाषामा भन्नुपर्दा तिनीहरू एक प्रकारको इलेक्ट्रोनिक पैसा हुन्।
कि चीजहरू overmplifying हुन सक्छ, यो समय को लागी एक उपयोगी शॉर्टहैंड को रूप मा सेवा गर्नु पर्छ।
यदि तपाईं यस अवधारणाको अन्वेषण गर्न चाहनुहुन्छ भने, निम्न सिद्धान्तहरू प्रविधिको मूलमा छन्। अवश्य पनि, निम्न जानकारी सबैका लागि नहुन सक्छ। भाग्यवस, तपाईले बुझ्नुपर्दैन कि सबै कुरा कसरी फाइदाको मजा लिने काम गर्दछ।
विनिमयको विकेन्द्रीकृत माध्यम:
अधिकांश मुद्राहरू केन्द्रीय संस्थाद्वारा नियन्त्रण गरिन्छ। उदाहरण को लागी, अमेरिकी डलर संग, यो संघीय रिजर्व हो कि सबै कुरा को नियन्त्रण मा छ। तिनीहरूले निर्णय गर्न को लागी कति नयाँ डलर एक वर्ष मा अर्थव्यवस्था मा राखिन्छ। जे तिनीहरू भन्छन् जान्छ। तुलनामा, क्रिप्टो कुनै एकल एकाइ द्वारा नियन्त्रण हुँदैन। यसको सट्टामा, यो एक उदय घटना हो जुन धेरै कम्प्युटरहरू र सँगै नेटवर्कि ofको परिणाम हो।
ब्लकचेन एउटा अपरिवर्तनीय सार्वजनिक लेजर हो:
यसको आधारमा, क्रिप्टो ब्लकचेनमा निर्भर छ। ब्लकचेन बिना, क्रिप्टोको विश्वमा केहि पनि काम गर्दैन। जे होस्, तपाईले यो चेन भनेको के हो? सामान्यतया बोल्दा तपाई यस प्रकारको सोच्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै किताब खाट र बिहानको खाजामा। यसको सट्टामा, नेटवर्कमा सबैले पुस्तक एकै समयमा देख्न सक्दछन्। थप, केवल नेटवर्कका सदस्यहरूले खातामा सम्पादन गर्न सक्दछन्। यसैले, यो परम्परागत मुद्रा प्रविधि भन्दा धेरै सुरक्षित छ।
तपाईले कसलाई सोध्नु भएको छ त्यसमा निर्भर, यसलाई लगानीको एक नयाँ तरिका मान्न सकिन्छ:
सायद सबैभन्दा उल्लेखनीय गुण, अस्थिरता, जुन मानिसहरूलाई यी मुद्राहरूमा पहिलो स्थानमा आकर्षित गर्दछ। किनकी तिनीहरू सहि रणनीतिको साथ मूल्य छिटो परिवर्तन गर्न चाहन्छन्, तपाईं तिनीहरूलाई सम्पत्तीको एक प्रकारको रूपमा व्यापार गर्न सक्नुहुनेछ। केहि अवसरहरुमा, मान्छे भाग्यशाली हुन्छन् र आफ्नो लगानीको रातारात मूल्यमा स्काइरोकेट हेर्नुहोस्। जे होस् यो असामान्य छ, यो अझै पनि प्रख्यात कारणहरू मध्येका छन जुन उनीहरूले पहिले उनीहरूको ’boutमा सिक्यो।
एक क्रिप्टो क्यासिनो के हो?
यस बिन्दुमा, तपाईंसँग फाउन्डेन्टलहरूको सभ्य ज्ञान हुनु पर्छ। अब, हामी कसरी वास्तविक संसारमा लागू हुन्छन् कुरा गर्न सक्छौं। निस्सन्देह, क्यासिनोको कल तपाईंलाई पहिलो स्थानमा यहाँ ल्याउने कुरा हो। सामान्यतया, एक क्रिप्टो क्यासिनो परम्परागत भन्दा धेरै फरक छैन। खेलाडीहरूलाई उनीहरूको डलरमा जुवा खेल्न अनुमति दिनुको साटो यी संस्थाहरूले खेलाडीहरू टेबुलमा क्रिप्टो राख्न दिए। अरू सबै सामान्य जस्तो धेरै समान तरीकाले खेल्दछ।
यी विशेष फोकसको साथ दर्ता गरिएका खेल कम्पनीहरू हुन्:
धेरै जसो समय, मानिससँग केहि प्रश्नहरू हुन्छन् जुन उनीहरूले यो जस्तो खेल्नु अघि सोध्नु पर्छ। केहि नयाँ भएकोले, यो आश्चर्यजनक छैन कि मानिसहरूका दिमागको पछाडि केही चिन्ताहरू छन्। भाग्यवस, हाम्रो सूचीमा कुनै पनि संस्था पूर्ण रूपमा गेमि आयोगको साथ दर्ता गरिएको छ। यस तरीकाले तपाईलाई थाहा छ कि सबै पट्टी भन्दा माथि छ। अन्यथा, तपाइँले कसरी थाहा पाउनुहुने छ कि तपाइँले त्यहाँ खेल्ने निर्णय गर्नु अघि संस्था विश्वसनीय छ?
अमेरिकी डलर प्रयोग गर्नुको सट्टा, उनीहरू खेलाडीहरूलाई केवल क्रिप्टोमा सामेल हुन अनुमति दिन्छन्
मानौं तपाईंले केही वर्ष पहिले लगानी गर्नुभयो। अब, यस्तो लाग्दछ कि यो धेरै मूल्यवान छ। यद्यपि क्रिप्टोको त्यो पहिलो खरीद त्यतिखेर ठूलो सौदा जस्तो नलागेको थियो, आजको समयमा यो पहिलेको भन्दा धेरै मूल्यवान हुन सक्दछ। यदि तपाईंले क्रिप्टोको लुकेको छुट्टिहरू फेला पार्नुभयो भने, यी मध्ये कुनै एकले तपाईंको लुटेको केही लुगा लगाउन सही ठाउँ थाहा पाउँदछ। कसलाई थाँहा छ? रातीको अन्तमा, तपाईं त्यस ठाउँबाट भित्र पस्नुभयो भन्दा धेरै टाढाबाट तपाईं हिंड्न सक्नुहुन्छ।
क्राइप्टो क्यासिनोमा कसरी खेल्ने?
त्यसोभए, तपाई अहिले सम्भवतः यी प्रतिष्ठानहरू मध्ये कुनै एउटामा कसरी खेल्ने भनेर सिक्नमा रुचि राख्नुहुन्छ। यदि तपाईं एक अनलाइन क्यासिनो मा विगतमा खेल्नु भयो भने, यी संस्थानहरू मध्ये कुनै एकमा चीजहरू कसरी जान्छन् भन्दा यो धेरै फरक हुँदैन।
कुनै अन्य अनलाइन क्यासिनो जस्तै:
अन्य संस्थाहरू जस्तै, तपाईंले खेल्न अघि एक खाता दर्ता गर्नुपर्नेछ। त्यसो भए, रकमहरू तपाईंको वालेटमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। अन्यथा, यदि तपाईं टेबलमा पुग्न सक्नु भए पनि, तपाईंसँग बेट लगाउन केहि पनि छैन।
यी बाहेक, तपाईं क्रिप्टोसँग खेल्नुहुन्छ:
अवश्य पनि, तपाईले आफ्नो खाता खोल्नु भएपछि, तपाईले रकम जम्मा गर्नु भन्दा पहिले तपाईले रकम प्राप्त गर्नुपर्नेछ। तपाईंले कुनै डलर प्रयोग गर्नुहुने छैन, तपाईंले तिनीहरूलाई उचित क्रिप्टोको लागि आदानप्रदान गर्नुपर्नेछ। क्यासिनोमा निर्भर गर्दै, विशिष्ट क्रिप्टो स्वीकार गर्न सकिन्छ। यदि तपाईंसँग उनीहरूलाई खरीद गर्न कुनै अनुभव छैन भने, यो बिन्दुमा सावधानी अपनाउनु राम्रो हुन्छ। आज, त्यहाँ हजारौं विभिन्न क्रिप्टो वर्तमान छ। यदि तपाईंले गल्तीले गलत खरीद गर्नुभयो भने, जब केसि hugeले यसलाई अस्वीकार गर्‍यो भने यो पैसाको ठूलो बेकार हो।
सुरू गर्न तपाईले आफ्नो खातामा क्रिप्टो जम्मा गर्नुपर्नेछ:
सामान्यतया भन्ने हो भने, व्यक्तिलाई क्रिप्टो पाउने सब भन्दा सजिलो तरीका भनेको उनीहरूलाई एक्स्चेन्जबाट किन्नु हो। यी प्रतिष्ठानहरू मध्ये कुनैसँग काम गरेर, तपाईं तिनीहरूलाई अमेरिकी डलर पठाउन सक्नुहुनेछ र बदलामा क्रिप्टो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसो भए तपाईले आफ्नो क्यासिनो वालेटमा पैसा पठाउनु पर्छ। एक पटक तिनीहरू जम्मा भएपछि, तपाईं यो गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ, आज रात तपाईंको भाग्यशाली दिन हुनेछ।
यती धेरै क्यासिनोहरू छनौट गर्नका साथ, यस्तो लाग्न सक्छ कि सबै भन्दा राम्रो पत्ता लगाउनको लागि लगभग एक दुरूस्त कार्य हुन सक्छ। जे होस्, हाम्रो बृहत अनुभवका लागि धन्यबाद, हामीले हाम्रो प्रक्रिया ठीक-ट्युन गर्न सफल भयौं। त्यस बाटोमा, उद्योगमा नयाँ क्यासिनोको रूपमा, हामी एक क्षणको सूचनामा उपयुक्त रेटिंग दिन सक्दछौं। त्यस कारणका लागि, हामी छिटो संसारमा सब भन्दा प्रतिष्ठित क्यासिनो रेटिंग्स संस्था मध्ये एक भएका छौँ। सामान्यतया, हाम्रो प्रक्रिया निम्नानुसार छ।
पहिले, हामी तिनीहरूको खेल चयनमा हेर्छौं:
किन मानिसहरू प्राय: क्यासिनोहरूमा जान्छन्? सामान्यतया, हाम्रो अनुभवमा, यो ’cause तिनीहरू केहि खेलहरू खेल्न चाहन्छन्। नतिजाको रूपमा, विभिन्न क्यासिनोको मूल्या .्कन गर्दा खेल चयन हाम्रो सबैभन्दा बढी भारित कारक हो। मानिलिंदै सबै उस्तै छ, राम्रो चयनको साथ क्यासिनो हरेक पटक जित्नेछ।
दोस्रो, हामी उनीहरूको प्रचार जाँच गर्दछौं
तिनीहरूको खेल चयन पछ्याई, हामी उनीहरूले कस्तो किसिमको प्रचार-प्रसार प्रस्ताव गर्दछन् त्यसमा ध्यान दिन चाहन्छौं। सामान्यतया, धेरै क्यासिनोहरू पहिलो पटक खेलाडीहरूको लागि प्रशस्त उदार पुरस्कार प्रदान गर्दछ। अवश्य पनि, यो बोर्डमा मानिसहरूलाई हामफाल्ने एक युक्ति हुन सक्छ। त्यस कारणका लागि, हामी अवलोकन गर्न चाहन्छौं कि उनीहरूले विद्यमान खेलाडीहरूलाई के प्रस्ताव गर्छन्। यदि उनीहरूसँग राम्रो चयन छ भने, त्यसो भए उनीहरूको अन्तिम ग्रेडका लागि यो उत्कृष्ट हुनेछ।
अर्को, हामी यो रकम जम्मा गर्न र निकासी गर्न कत्ति सजिलो छ भनेर निर्धारण गर्दछौं
ती दुई कारकहरू पछि, हामी जाँच गर्छौं मानिसहरूका लागि रकम जम्मा गर्न कति सहज छ। सरल जस्तो देखिन्छ, सबै ठाउँहरूले यसलाई पत्ता लगाउन मद्दत गर्दैन। केहि अवसरहरूमा हामी हाम्रो पैसा क्यासिनोमा जम्मा गर्न संघर्ष गर्दछौं। स्पष्ट रूपमा ती परिस्थितिहरूमा यसले क्यासिनोलाई प्रश्नको रूपमा डिमिरेटको रूपमा काम गर्ने छ। यो खेल को लागी मानिसहरुका लागि सजिलो छ, उनीहरूको कोटीमा राम्रो स्कोर हुन्छ।
अन्तमा, हामी तिनीहरूको ग्राहक सेवाको गुणस्तर जाँच गर्दछौं
हामीले क्यासिनोलाई अन्तिम स्कोर दिनु भन्दा पहिले हामीले ग्राहक सेवासँग कुरा गर्न र कुरा गर्नुपर्‍यो। आशा छ, वास्तविक संसारमा तपाईले यी मान्छेहरुसंग कहिले पनि व्यवहार गर्नु हुन्न। अझै, हामी बुझ्छौं कि जहिले पनि योजना सधैंको रूपमा जानु हुँदैन। ती अवसरहरूको लागि, यसले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ जब तपाईंलाई थाहा छ कि त्यहाँ कुनै आश्चर्यजनक ग्राहक सेवा टीम छ जुन तपाईं भेट्टाउनु भएको कुनै पनि मुद्दामा मद्दतको लागि कुर्दै छ। टिम जति उपयोगी छ, उनीहरूले हाम्रो मूल्या on्कनमा राम्रो काम गर्छन्। अवश्य पनि, यसले विपरित दिशामा पनि उही तरिकाले कार्य गर्दछ।
के खेल क्रिप्टो क्यासिनो प्रस्ताव?
मानौं कि तपाइँ खेलहरू ’bout जान्न चाहानुहुन्छ तपाइँ यी क्यासिनो मध्ये कुनैमा फेला पार्न आशा गर्न सक्नुहुन्छ। जबकि तपाईं ती सबैमा प्रत्येक खेल फेला पार्नुहुन्न, प्राय जसो घटनाहरूमा, तपाईं चयनमा प्रभावित हुनुहुनेछ। परम्परागत क्यासिनोको तुलनामा, उस्तै परिचित सबै अनुहारहरू क्रिप्टो क्यासिनोमा फेला पार्न सकिन्छ।
सबै भन्दा माथि, तपाईं आफ्नो समय बाईड गर्दा खेल्ने धेरै स्लट मेसिनहरू पाउनुहुनेछ। ’cause तिनीहरू क्यासिनोमा सबैभन्दा लोकप्रिय खेलहरू मध्ये एक हुन्, यो बुझ्दछ कि तिनीहरू उद्योगको सेक्सनमा यति धेरै प्रचलित छन्।
स्लट मेसिनहरू पछ्याउँदै, टेबल खेलहरू सूचीमा अर्को सबैभन्दा लोकप्रिय आईटम हुन्छन्। भाग्यवस, हाम्रो परीक्षणहरूबाट, यस्तो देखिन्छ कि यदि यी क्यासिनोहरूले यी खेलहरू मध्येका केहि प्रस्ताव गर्दछ। त्यस बाटोबाट, तपाईं पूरै रात स्लट मेसिनमा अडिनुहुनेछैन। एकचोटि तपाईंले यो निर्णय गर्नुभयो कि तपाईं ब्रान्च गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईं जहिले पनि प्रयास गर्न वा थप जान्नको लागि र तपाईंको खेल सुधार गर्नुहोस्।
सामान्यतया, हामी हाम्रो समय ब्ल्याकज्याक टेबलमा खर्च गर्न चाहन्छौं। किनकि नियमहरू जहिले पनि समान हुन्छन्, हात पछाडि बस्न पछि तपाईंलाई समात्नु त्यति गाह्रो हुँदैन। जब तपाइँ अरू के गर्ने थाहा हुनुहुन्न, तपाइँलाई जोनमा फिर्ता लिनको लागि तपाइँ सँधै ब्ल्याकजेकको द्रुत खेलमा भर पर्न सक्नुहुन्छ। केवल काता राम्रो ब्ल्याकजेक गाइड र रणनीतिहरू पढ्नुहोस् ब्ल्याकजेक खेल्न सुरु गर्नु अघि।
हुनसक्छ, तपाईलाई केहि मनपर्न सक्छ जुन तपाई जुवा खेल्दै गर्दा केहि बढी सामाजिक छ। यदि ती तपाइँको स्वाद हुन जान्छ भने, तब हामी रूलेट को द्रुत मोडको सुझाव दिन सक्छौं। यति धेरै विकल्पहरूको साथ, यसले यस सूचीका अन्य खेलहरू भन्दा केही ठूलो भीडलाई आकर्षित गर्दछ। यद्यपि यो तुलनात्मक रूपमा आला छ, हामी विश्वास गर्दछौं कि यो यहाँ राख्नु सार्थक दावेदार हो।
सबै भन्दा उत्तम, अधिक र अधिक प्रत्यक्ष अनलाइन क्यासिनो लाई लाइभ जुवा विकल्पहरू प्रस्ताव गर्न शुरू भयो। । यस तरिकाले, तपाईं वास्तविक समयमा विश्वभरका अन्य मानव खेलाडीहरूसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रयोग गरेर, तपाई ब्यक्तिगत अनुभवहरू पाउनुहुनेछ जुन तपाईका व्यक्तिगत क्यासिनोसँग सम्बन्धित छ। हाम्रो विचारमा, यी खेलहरूले भविष्यमा उद्योगको लागि भण्डार गरिएको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
कसरी क्रिप्टो क्यासिनोमा जम्मा गर्ने?
अहिले, यो तपाईंलाई भन्नु को लागी एकदम सजिलो हुनु पर्छ कि यी क्यासिनो तपाईंको सामान्य खेल घर भन्दा धेरै फरक छैन। धेरै जसो अवसरहरूमा, केवल मुख्य भिन्नता भनेको तपाईको बाजी राख्न पैसा प्रयोग गर्नु हो।
अवश्य पनि, यी संस्थाहरू मध्ये एकमा तपाईंको शर्त राख्न, तपाईंले केही क्रिप्टोमा हात उठ्नुपर्नेछ। अन्यथा, तपाईं एक दर्शकको रूपमा किनारमा बस्नुपर्नेछ।
भाग्यवस, तलका चरणहरू अनुसरण गरेर, तपाईं कुनै पनि क्रिप्टो खरीद गर्न सक्नुहुनेछ जुन पनी कुनै पनि समस्याको साथ। जबसम्म तपाईंसँग सबै आवश्यक कागजातहरू छन्, तपाईं नयाँ क्रिप्टो क्यासिनोमा रातको अन्त्य हुनु अघि खेल्न सक्नुहुनेछ।
खाताको लागि दर्ता गर्नुहोस्, त्यसपछि जम्मा बटनमा क्लिक गर्नुहोस्:
सामान्यतया बोल्दै, प्रायः संस्थानहरूले तपाईंको सरकारी पहिचानको प्रतिलिपि गर्दछ। तपाईंले खरीद गर्न सक्नु अघि, तपाईंले यसलाई सबमिट गर्न अनिवार्य छ। कहिलेकाँही, यो जानकारी प्रशोधन गर्न केहि दिन लिन सक्दछ। जे होस्, यदि तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने, प्रक्रिया केही क्षणमा समाप्त हुनुपर्दछ।
अर्को उपकरण प्रयोग गरेर, क्रिप्टो एक्सचेन्जमा जानुहोस्:
एकचोटि तपाईंले खाताको लागि दर्ता गर्नुभयो, तपाईंले थप अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुपर्नेछ। यी अनुप्रयोगहरूका साथ तपाईलाई क्राइप्टो भण्डारण गर्ने बेला तपाईलाई ठेगाना दिइनेछ। सामान्यतया, सजिलो वालेट कल गर्नुहोस्। यो तपाईको जेबमा भएको चीजसँग मिल्दोजुल्दो छ। यद्यपि यो इलेक्ट्रोनिक रूपमा मात्र अवस्थित छ।
क्रिप्टो खरीद गर्नुहोस् अमेरीकी डालर प्रयोग गरेर:
अब तपाईंसँग वालेट छ, तपाईं अन्ततः केहि क्रिप्टो खरीद गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सचेन्जमा, तपाईले मार्फत व्यापार चलाउनुहोस् यदि तपाई स्टक खरीद गर्दै हुनुहुन्छ भने। त्यसो भए, अघि बढ्नु अघि यसको लागि यो प्रतीक्षा गर्नुहोस्। एक पटक अर्डर पूरा भएपछि, तपाईंले एक्सचेजमा तपाईंको वालेटमा कोष देख्नु पर्छ। अर्को, तपाईंले यसलाई क्रिप्टो क्यासिनोमा पेश गर्नु अघि यसलाई तपाईंको व्यक्तिगत वालेटमा फिर्ता लिन आवश्यक छ।
तब, क्यासिनोबाट वालेट ठेगाना प्रयोग गरेर, एक्सचेन्जबाट कोष पठाउनुहोस्:
तपाईंको व्यक्तिगत वालेटमा, तपाईंको खातासँग सम्बन्धित ठेगाना फेला पार्नुहोस् र प्रतिलिपि गर्नुहोस्। एक पटक यसको प्रतिलिपि बनाइए पछि, क्यासिनो वेबसाइटमा उपयुक्त वालेटमा जानुहोस्। त्यहाँबाट तपाईले वालेट ठेगाना टाँस्न सक्ने क्षेत्र हेर्नुपर्नेछ। तपाईंले यसलाई टाँस्नुभए पछि, प्रमाणित गर्नुहोस् कि यस बीचमा केहि पनि परिवर्तन गरिएको छैन।
खानीका शुल्कहरू कभर गर्नको लागि पर्याप्त रकम प्रदान गर्नुहोस्:
अन्तमा, तपाई सबमिट बटन थिच्नु भन्दा पहिले, साना शुल्कको लागत कवर गर्न पर्याप्त क्रिप्टो पाउनुभयो भन्ने निश्चित गर्नुहोस्। प्रत्येक चोटि तपाईले कतै नेटवर्कमा क्राइप्टो पठाउनु हुन्छ, एक्सचेन्जको लागि तपाईले सानो शुल्क तिर्नु पर्छ। यसले मेशिनहरूको लागि बिजुलीको लागत कभर गर्दछ जुन लेनदेन प्रमाणित गर्दछ। तिनीहरू बिना, यो कुनै पनि काम गर्दैन। यसैले, यी शुल्कहरू अपरिहार्य छन् यदि तपाईं क्रिप्टो प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने।
कसरी क्रिप्टो क्यासिनोबाट फिर्ता लिने?
मानौं तपाईं क्यासिनोमा एक राम्रो रात थियो। यदि त्यसो भएमा, त्यसो भए तपाईं कसरी रातको अन्तमा तपाइँको जीत फिर्ता लिनुहुन्छ? ठिक छ, जब सम्म यो एक सभ्य संस्था हो, यो रकमहरू जम्मा गर्नुपर्दछ जुन तपाईंले कोष जम्मा गर्दा प्रयोग गर्नुभएको थियो। जे होस्, तपाईंले क्यासिनोको सट्टा व्यक्तिगत पर्सबाट वालेट ठेगाना प्रयोग गर्नु पर्छ।
तपाईंको उपकरणमा, डिजिटल वालेट सिर्जना गर्नुहोस्:
यदि तपाईंले आफ्नो पैसा फिर्ता लिनको लागि वालेट सिर्जना गर्नुभएको छैन भने, तपाईंले अब एउटा बनाउनु पर्छ। भाग्यवस, त्यहाँ धेरै अनुप्रयोगहरू छन् जुन तपाईंलाई मात्रै गर्न दिनुहोस् जहाँसुकैबाट इन्टरनेट जडानको साथ। तपाईको आवश्यकता अनुसारको केहि खोज्नुहोस् र अगाडि बढ्नु अघि वालेट सेट अप गर्नुहोस्।
वालेट भित्र, तपाईको वालेटको ठेगाना फेला पार्नुहोस्:
पहिले जस्तै, खातामा तपाईंको वालेटको ठेगाना फेला पार्नुहोस्। तपाईंले यसलाई पत्ता लगाएपछि, यसलाई तपाईंको क्लिपबोर्डमा प्रतिलिपि गर्नुहोस्। त्यसो भए क्यासिनोको वेबसाइटमा नेभिगेट गर्नुहोस्।
क्यासिनो वेबसाइटमा, फिर्ता पृष्ठमा जानुहोस्:
त्यहाँबाट तपाईंले एक खण्ड देख्नु पर्छ जसले पैसा जम्मा गर्न क्लिक गरेको स्थानको नजीक फिर्ता लिन्छ। जब तपाइँ उपयुक्त लेबल फेला पार्नुहुन्छ, तपाईं यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ जति चाँडो तपाईं चाहानुहुन्छ।
त्यहाँबाट, तपाईंको वालेटको ठेगाना टाँस्नुहोस्:
त्यो पृष्ठमा, तपाईं एक खाली ठाउँमा देख्नुहुनेछ जहाँ तपाईं वालेटको ठेगाना टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो क्षेत्रमा, तपाईंले प्रतिलिपि गरेको जानकारी पेस्ट गर्नुहोस्।
ठेगाना सहि प्रमाणित गर्नुहोस्, त्यसपछि जारी क्लिक गर्नुहोस्:
एकचोटि तपाईंले फारममा डाटा राख्नुभयो भने, तपाईंलाई सब कुरा ठीक छ भनेर प्रमाणित गर्न राम्रो हुनेछ। केही उदाहरणहरूमा परिवर्तन हुनको लागि यो सुन्ने छैन। दुर्भाग्यवस, जब तपाईं क्रिप्टो प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, प्राय: गल्तीहरू स्थायी हुन्छन्। त्यस कारणका लागि, तपाईंको कार्यलाई डबल-जाँच सबमिट गर्नुभन्दा अघि आवश्यक छ यदि तपाईं गल्तीहरू त्याग्न चाहानुहुन्छ भने।
ब्लकचेनलाई लेनदेन प्रक्रिया गर्न पर्याप्त समय दिनुहोस्:
सामान्यतया, धेरै लेनदेन एक घण्टा भित्र धेरैमा पूर्ण हुनुपर्दछ। यद्यपि केहि अवसरहरूमा यसले धेरै लामो समय लिन सक्दछ। यदि तपाईं आफ्नो लेनदेनको प्रसंस्करणको समय छिटो गर्न चाहानुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईंले भुक्तानी पेश गर्नु अघि माइनर शुल्कहरू कभर गर्नको लागि तपाईं बढी रकम छुट्याउन सक्नुहुन्छ। अधिक रकम तपाईले खणिकाहरूलाई विनियोजन गर्नुहुन्छ, तपाईंको लेनदेनको द्रुत गतिमा प्रक्रिया गर्दछ।
एकचोटि यो लामो भयो, रकम तपाईंको डिजिटल वालेटमा देखा पर्दछ:
पर्याप्त समय बितिसकेपछि, तपाईं आफ्नो वालेटमा कोषहरू देखा पर्नुहुनेछ। केही अनुप्रयोगहरूको साथ तपाईले उनीहरूलाई देख्नु हुनेछ तिनीहरू अझै पक्का छैनन्। जे होस्, जब सम्म तिनीहरूले पर्याप्त पुष्टिकरण प्राप्त गर्दैनन्, तपाईं तिनीहरू पहुँच गर्न असक्षम हुनुहुनेछ। त्यस कारणका लागि हामी तपाईको वालेटमा जाँच गर्नु अघि केही समय दिन सल्लाह दिन्छौं। अन्यथा, यो निराश व्यायाम हुन सक्छ।
कसरी तपाईंको आफ्नै क्रिप्टो क्यासिनो खोल्ने?
यदि तपाईं यी मध्ये कुनै एक संस्था खोल्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए हामीले तपाईंको लागि केही ठूलो समाचार पाएका छौं। यद्यपि तिनीहरूले तुलनात्मक रूपमा उपन्यास प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छन्, यी मध्ये एउटा खोल्न यत्तिको सजिलो छ किनकि यसलाई सामान्य क्यासिनो खोल्न सकिन्छ। तिनीहरूको अस्पष्टताको बावजुद, यी भूमिगत जुवा सर्किटमा क्रेक्शन प्राप्त गर्न जारी राख्छन्। किनकी व्यक्तिले संसार भर बाटै पहुँच गर्न सक्दछन्, यदि तपाईंले एउटा खोल्नुभयो भने, तपाईंसँग बृहत बजारमा पहुँच हुनेछ। जति सक्दो चाँडो मेसिनहरू चल्दैछन्, बढि सिट पाउन गाह्रो हुन्छ।
एउटा कम्पनी स्थापना गर्नुहोस्:
अन्य कम्पनीहरू जस्तै, यी मध्ये एक स्थापना गर्न, तपाईंले निगम दर्ता गर्नुपर्नेछ। धेरै जसो उदाहरणहरूमा, हामी एक LLC को रूपमा समावेश सुझाव दिन्छौं। यस वर्गीकरणको साथ, तपाईंले कुनै पनि व्यक्तिगत दायित्व सीमित गर्नुहुनेछ जुन तपाईंले अन्यथा मान्नुपर्नेछ। यस तरिकाले, तपाईं आफैंलाई सुरक्षित गर्न सक्नुहुनेछ अझै अझै पनि तपाईंको ग्राहकहरूको लागि मूल्यवान सेवा प्रदान गर्ने।
गेमि आयोगको साथ दर्ता गर्नुहोस्:
व्यक्तिले जुवा खेल्न सुरू गर्नुभन्दा पहिले, तपाईंको कम्पनीले गेमि आयोगको साथ दर्ता गर्नु आवश्यक छ। जुनसुकै सेवा प्रदान गर्ने कुनै पनि संस्था कानूनी रूपमा सञ्चालनका लागि दर्ता हुनुपर्दछ। अप-टु-डेट पंजीकरण बिना, तपाईं तुरुन्त बन्द गर्न सक्नुहुनेछ। यदि गलत व्यक्तिले तपाईंको व्यवसायको ’boutमा सुन्दछ, मिति पाएको मिति भन्दा अघिल्लो कागजहरू, तपाईले गर्न सक्ने केहि छैन। कागजको साथ अप-टु-डेट रहँदा, तपाईले केहि चिन्ता लिनु पर्दैन।
क्रिप्टोको रूपमा भुक्तानी सक्षम गर्नुहोस्:
अवश्य पनि, किनकि तपाईं क्राइप्टो क्यासिनो सञ्चालन गर्न चाहानुहुन्छ, त्यसो भए तपाईले भुक्तानी सक्षम गर्नुपर्नेछ। क्रिप्टोकरन्सी प्रयोग गरेर, भुक्तानी प्रोसेसरको साथ सम्बन्ध स्थापित गर्नुहोस्। आज, त्यहाँ धेरै कम्पनीहरू छन् जुन यस प्रविधि प्रयोग गरेर भुक्तानी प्रशोधन प्रस्ताव गर्दछ। त्यसकारण, तपाईले मार्केटमा धेरै प्रतिस्पर्धा भेट्नुहुनेछ तपाईको व्यवसायको लागि एक अर्कालाई भेट्न इच्छुक हुनुहुन्छ। सामान्यतया, यो ठूलो सम्झौता पाउन गाह्रो छैन। त्यो समाप्त भएपछि, तपाईं व्यापारको लागि तपाईंको ढोका खोल्न सक्नुहुन्छ। यस बिन्दुमा, यो परम्परागत क्यासिनो भन्दा फरक छैन व्यवस्थापनको लागि।